Dhacdo Dhab ah Sheeko:Waan isla Qumanaaye Ma anigaa Qaldanaa?!!! | Puntland Online
Dhacdo Dhab ah Sheeko:Waan isla Qumanaaye Ma anigaa Qaldanaa?!!!
Jaceylka waa wax jira waxaana qof walba uu u soo maraa marxalo kaladuwan oo mid walba xambaarsan arinteeda.
Aniga waxaan kamid ahaa dhalnyarada Soomaaliyeed waxaan ku noolaa Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya waxaan qeyb ka ahaa dhalinyaradii 2005 tii ka wax baraneysay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya,dabeecad uma laheyn in aan fariista meelaha ay dad ka isugu yimaadeen sida maqaayada iyo goobaha fadhi ku dirirka ah.
Waxaan ahaa Nin qunyar socod ah Marka loo eego La socodka Bulshada waxaan aad u dhecbaa la sheekeesiga dumarka hiwaayadeydu waxa ay aheyd un waxbarashada iyo sidii aan hor mar ugaarsiin lahaa qoyska aan ka dhashay oo xilligaasii ahaa Faqiir,waxeyna midda keentay in aan noqdo qof aan dan iyo ujeedo ka laheyn fariisiga goobihii aan kor ku soo sheegnay.
Jacfar ayaa waxaa uu ahaa wiil aan saaxibo nahay ,waxaan aheyn dad aad isugu dhow oo waxaan wadaagi jirnay wax walba oo ay wadaagaan dad ka ay ka dhexyso Saaxibtinimada,laakiin waxaa hoosta iga soo galay dabeyl ama duufaan aan garanin Meesha ay iga soo gashay ,taasoo noqotay mid badashay nolasheydii qaaliga aheyd oo ku dhisneyd jadwal aan ugu talagalay.
Majecli in aan dheereeyo laakiin aan ugalo ujeeda aan ka leeyahay Sheekadaan oo ah qiso dhab ah oo ka dhacaday Magaalada Muqdisho,waxaana ugu talagalay in aan gaarsiiyo Bulshada Soomaaliyeed,gaar ahaan da’yarta oo hadda laga yaabo qaarkood in ay uhanqal taagayaan Falaaraha Jaceylka,halka qaarka kale ay hadda dhexmushaaxayaan Mujadaha kala duwan ee ku saabsan Jaceylka xilligan.
Sagal waxaa ay kamid aheyd Gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan gabdha xilligii uu itoobiyaan Muqisho jooga Magaalada kusugnaa,waa gabar qofkii eegaa uu san damiirkiisa siineynin in uu ka jeesto,taana waxaa ay keentay in ay raacdo Nat aan aqoon hami,Caashaq ama Jaceyl,iyadoona Jaceylka lagu tilmaamo in uu kamid yahay Cudarada halista u ah dhanka maskaxda.
Xilligaa waxaa ay aheyd 2006 dii Magaalada muqdishana xaalkeeda mafiicneyn,mana aheyn xilli ku haboon in aad dareento Jaceyl iyo wax lamid ah iyadoo Maalin walba Muqdisho ay ku dhimanjireen boqolaal qof oo Muslimiin ah,saas ay tahay waxaa aniga igu beermay Jaceyl awoodiisa aan aqoon waayay waxa aan ku qiyaaso.
Jaceylka waxaa jira meelo halis ah ,haddii uu kaa soo mara ay ku dhowdahay in aad ku guul dareysato,hadaba aniga waxaa uu iga soo maray dhanka bidix oo aan ula jeedo meeshii halista aheyd qofwalbana oo wax ka yaqaan arimaha Jaceylka uu fahmi karaa.
Iyadoo ay saas jirto ayaa hadana Sagal waxa ay la dhalatay Jacfar oo ahaa Saxiibkii kali’ah ee aan ku lahaa dalka gaar ahaan Magaalada Muqdisho oo aan xilligaas ku sugnaa,waxaana adkaatay in aan jaceylkeyga aan banaanka soo dhigo,oo ay ogaato gabadhii Sagal aheyd.
Nafteyda iyo aniga waa is khilaafnay mana aqoon xilligaasii Cidda Saxan Marka loo eego khilaafka xooggan ee ka dhaxeeya aniga iyo nafteyda,iyada oo ay saas jirto ayaa hadana Muqdisho laga qaxay oo cidwalba waxa ay u baxsatay meeshii ay doonto aniga iyo Sagalna waan kala foganay,aniga waxaan aaday Deegaanka Shalaanbuud oo ka tirsan gobalka Shabeelada Hoose,halka Sagal iyo reer koodana ay ubarakaceen dagmada daayniile oo ku taala duleedka magaalada Muqdisho.
Waxaa igu sii ziyaaday wal walka iyo walbahaarka u shidan nafteyda,maadaama ay aad iga fogaatay naftii ay si kadis ah u door biday,habeen walba waxaa aan ka fikaraa Xaaladda marwalba igu soo kordheysa Shaqsiyan, jahawareer aan la aqoon halka uu ka yimid ayaa marwalba dareemaa waxaan takoor ka noqday bulshadii aan ku dhexnoolaa ,gaar ahaan qoyska aan la dhoolahay.
Waxaa aad u dhibdan in uu Jaceyl ku qabto,hadana uu kaa galo meel Qatar ah calashaan Saaxibaa walaashiis in aad jeclaato,mana oga qof ka aan jeclahay waa arin layaab badan oo u baahan in laga fikiro,laakiin Qofka Marka uu Jaceyl haleelo waxaa uu lakulmaa dhibaatooyin farabadan oo ay ugu horreso Murug,Isla hadal,Fikir, iyo hal abuur,dhanaan qodobadaasii oo idilna waxa ay ahaayeen kuwo aan isku arkayay,mana aqoon meesha aan wax kabilaabo.
Maalin Talaada ah Taariikhdana ay ku beegneyd 30-Novembar 2006 dii ayey aheyd Markii ugu horreysay oo ay indhaheygu qabtaan tan iyo markii laga qaxay Magaalada Muqdisho ,Maalintaas ujeedka aan lahaa waxaa ay aheyd in aan soo arko ubaxii dooga lahaa oo aanan arkin in mudda ah ,inkastoo aan aqoon ulaheyn xaafadda ay daganeyd Sagal ,hadana waxaan soo tilmaamsaday xaafadda ay kadagantahay Degmada daayniile.
All mahaddii waxaa ii suuragashay in aan soo gaaro gurigii ay ku nooleyd Sagal oo aan u arkayay Dawadii Nafteyda,markii aan soo gaaray waxaan si ay xushmad ku jirto ugaraacay Albaabkii guriga reerka ay Sagal ka dhalatay anigoo ka baqaya in Albaabka ay igafurto Sagal.
Albaabka guriga waxaan garaacayay muddo aad u yar waxaana durbadiiba guriga iga furay Sagal oo aheyd Muraadkii aan lahaa oo kali ah,anigoo aan Salaamin Sagal ayaa waxaan si kadis ah u weydiiyay Jacfar mee Walaal? waxaana iska ilaalinayay in ay ifahanto waxa niyadeyda ku jira.
Sagal oo aheyd gabar aad u wanaagbadan ayaa waxaa ay si diiran igu soo dhaweysay guriga iyadoo muujineysa dareen walaaltinimo maadaama aan Saaxib la ah Walaalkeyd Jacfar,lakiin waxaa niyadda iska lahaa Talow haddii ay ogaato Sagal arintaada Maxaad kala kulmidoontaa.?!!!
Aan ugudubno kulunkii walaaltinimo ee gaabnaa ee na dhexmaray aniga iyo Sagal ,Sagal waxaan weydiiyay Su’aalo Sarbeeb ah oo aan ugu talagalay in ay fahanto Xaqiiqda dhabta ah ee jirta ,laakiin kuma guuleysan in Sagal ay wax ka ogaato arimaha I heysta oo laga yaabo in ay inaafeeyaan.
Maalintaas aan kulmeynay aniga iyo Sagal waxaan Mar marsiyo ka dhiganayay in aan u baahanahay walaalkeed oo ahaa Saaxibkey waa Jacfar ,laakiin Jacfar ma imaan,anna Sagal waxaan ku iri waan sii baxayaa mar haddii uu imaanwaayay Saaxibkey Jacfar ,laakiin Sagaleey u sheeg yaa in aan u imaaday? Haye ayeey igu tiri gabadhii Sagal aheyd.
Intaa kadib waan ka soo tagay gurigii ay daganeyd Sagal ,laakiin wadada ayaan waxaan ku soo maray anigoo fikiriyaa.xittaa Maalintaasii waxaan ku sigtay in uu gaari ijiiro ,Maalintaas ma aqoon sida aan ahaa waxaan lug ka soo bilaabay dagmada Dainiile waxaana ku imid Xaafadda baar ubaax,laakiin meesha uu gaariga igu sigay waa Jidka warshada ha gaar ahaan warshadda taraqa iyo Sigaarka .
Waxii xilligaasii kadanbeeyay waxaa noqday Maqana joogi waxaan daayay wax barashadii aan ku jira ,waxaan sidoo kale dabacsanaan ay ku timid howlihii shaqo ee aan hayay Xilligaasii,laakiin iima ogeen qofka aan aniga u’arkay in ay tahay dawadii nafteyda ,maxaayeelay maba la socotaba waxa is badalay waxaana ay ii heysataa in aan ahay wiil walaakeed ah ,maxaayeelay waxaan Saaxib la’ah walaakeed Jacfar,haddii loosheegana waxaa ay ku noqoneysaa layaab iyo amakaak.
Sagal ma aheyn gabar laga samri karo maxaayeelay waa gabar uu alla Subxaano watacaala Siiyay Qurux iyo qiimo Balaaran waana midda aan ku xushay oo ay nafteyda Jaceyl u qaaday.
Haddii aan wax ka tilmaamo Muqaalka iyo dabeecadda Sagal waxaa kamid ah.
Sagal waa gabar dheer,oo dhexyar waxa ay laheyd Timo dhaa dheer oo hadana jilicsan Waxa ay aheyd gabar midibkeedu caddaan yahay ,aklaaqda Sagal waxaa ay aheyd mid aad u wanaagsan waxa ay sidoo kale aheyd mid ay ammaaneyn guud ahaanba bulshadii ay lanooleyd Sagal.
Waxa aan aamusnaadaba Maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa uu ilaah qadiray in aan u sheegto Sagal waxa aan u qabo,Maalintaas taariikhdu waxaa ay ku beegneyd Dhamaadka Bisha Desembar Sanadkii 2008 Hijriayadan waxaa ay aheyd Maalin Ciid ah waliba Ciidul Adxa.
Maalintaas waxaan ku dhiiraday in aan Teleefoon u diro Sagal islamarkaana aan u bandhigto Jaceylka aniga igu beermay isagoo indha la’aan ah.
Teleefoonka waxaa uu ahaa Teleefoonka gacanta lagu qaato oo uu lahaa wiil aan saaxib aheyn waxaana markii aan wacay igaqabtay sida aan filayay Sagal.
Markii aan maqlay Codkeeda aad baan isugu naxay waxaana igu dhagay Codkii waan garan waayay ujeedadii aan u soo wacay Sagal,laakiin Ma ogeen Sagal waxa ay ku heysay Hello!! Hello!!Hello!! Hello!!,Laakiin Mardanbe ayaan soo baraa rugay oo aan ku iri haa Hello!! Intaas kadib Sagal markii aan isku sheegay ayaa waxaa ay iu tiri haa Hanad Maxaa kaa si’ah Maanta Caadi matihid teedakale waxaad iga soo wacday Numbar aan aqooni,ayey tiri Sagal,laakiin waxaan ku iriri ,maya abaayo wax ba majiraan Xaaladeyna waa iska ok ee ii waran abaayo?
Waan ladanahay ayey igu tiri,intaas waxaa ay ahaayeen Salaantii,laakiin Salaanta kadib waxaan u daa diyay oo aan u sheegay sida ay wax u jiraan.
Waxaan u adeegsaday Erayo aan is iri Kolley aad bey ugu qancidoontaa Sagal Waxaana Jecelahay in aan Era adaas u soo bandhigo aqristayaasha ka mid ah bahda Jaceylka ,gaar ahaan kuwa kahadlaya Qisooyinka Saxada ah ee dhacay waxaana Eraydaas kamid ahaa.
Ay meel qarsoontahay
Qeebina taala banaanka
Sida qaansa roobaad
Ay daruuri qabatoo
Aan ka quusan dhaayaha
Qayo iyo wanaag iyo
Haduu qurx dad lee yahay
Waa laguugu qubayoo
Adigaana ka qadinoo
Inta badanba qaatay
Nafta kuugu qarweysoo
Wax la qabo abaayo
Intaas Markuu yiri Saaxibkeen Hanad ayaa waxaa durbadiiba la sii yay Jawaab runtii aad u Cabsi galisay Maadaama uu san is laheyn Sagal waxbey curi kartaa ,laakiin geeraarada uu ku hadlay kuwo kadaran ayaa looga jawaabay oo Maxey aheyd Jawaabtii La sii yay hanad ? bal aan eegno.
Qof aan adiga kaa helin
Oo horjoogsi aan kaa rabin
Heedhe laguma daalee
Adigoon dabaal baran
Badda ha isku tuurin
Hirka yuu ku qaadinee
Iska jog halkaad taal
Hunu hunu iyo Sheeko
Taleefoon hasoo dirin
Hana imaanin agteyda
Iga hako walaaloo
Cajiib Cajiib Cajiib Waa Jawaab aan Caadi aheyn oo la sii yay Hanad,lakiin hanad kuma qancin hadalkaasii kuleel ka badan ee ka soo baxay afka Sagl ,waxaana uu niyadda gashtay in uu mar un heli doono Sagal.
Maalintaas waxii kadanbeeyay Hanad niyadiisa Caadi ma aheyn oo wiilkii waxaa uu noqday maqane Jooge,dhamaan Asaxaabiisa waa ay fahmi waayeen waxa ku dhacay Hanad.
Qof ka Mar ka ay qabsato arin nuucaan oo kala ah oo ku aadan Jaceyl waxaa uu Sameeyaa Qorshooyin uu ku doonayo in uu ku hanto qof ka uu jeclaaday.
Hand waxaa uu badiyay Fikirka iyo in uu sameeyo is badal ku aadan sidii uu u hananlahaa gabadhan quruxda badan waxaa uu marwalba uu isku adayaa in uu qoro Buugaag ay ku qoranyihiin qaabkii loo soo jiidan lahaa qof kaa sii jeeda.
Habeen habeenada kamid ah ayaa hanad waxaa ay wada sheekeysanayeen isga aabihii iyo Wiil ka yar waxaana xilligaas lacunayay Cashado ,aabihiis oo ahaa aabe la sheekeysta Caruurtiisa islamrkaana ugu sheekeeya Sheekooyinka iyo qisoo yinka layaab ka leh ayaa waxaa uu sheeko u waday wiil ka kar oo xilligaasii diidanaa in uu waxbarto isgoona ku mar marsiyoonayay aabe waxaan ahay qof qalbigiisa uu adagyahay oo an waxba bari Karin.
Aabihii ayaa soo qaatay Sheeko Cajiib ah oo uu ugu talagalay Wiilkan yar ee dhahaya waan iska deynayaa waxbarashada Waxuu yiri aabihi ,Aabe dhageyso waxaa jirta hooyo reer baadiya ah oo wiilkeeda uu dhigan jiray dugsi qur’aan ,laakiin dhowr mar ayuu qur’aanka dhameeyay hadana qur’aankii mayaqaano waana ku ad kaatay in uu qur’aanka barto.
Maa madaas ayaa Maalin maalmaha kamid ah iyadoo soo doonatay Jaawaay (qoryo) waxa ay soo martay Ceel biyood waxa ay aragtay Ceelkaas oo Meesha wadaanta looga darsado ay yeelatay Calaamad,waxa ay isweydiisay xarigga ku xeran wadaantaas oo jeexay ama Calaamad usameeyay dhagaxii Ceelka waa arin layaab leh ,aabaha waxa uu ugu talagalay in uu mar labaad ku laabto wiilkaas wax barashadiisa.
Arintaas waxaa uu hanad ka dhexlay maskax iyo qorsho cusub,waxaana uu hoos iska yiri alley lehe waxaad heysataa fursado kale oo aad Sagal ugu dhaa dhicin karto arintaada.
Ogow wax walba oo ay dad ku wada hadlaan ama ay ku wada sheekeystaan qof bey Saameyneysaa ama dan ugu jirtaa maadaama waanadii wiilka yaraa loo waday ay noqotay mid dan ugu jirta Hanad waana sheeko dib u soo dhiseysa Niyad quusatay.
Markale ayuu isku dayay in uu lahadlo isagoo diidan in uu ogaado Saaxibkiis Jacfar ah,Taleefoon ayuu diray waa ka qaban weysay,laakiin Taleefoon kale ama Numbar aysan aqoonin ayuu ka wacay,Sagal oo qosleysa ayaa ka qabatay,hanadna Hello madhihini waxaa uu ku raaxeysanayay qosolkaan quruxda badan ee ka soo baxa Afka Sagal caddey.
1.5 ama hal daqiiqo iyo bar markii qad ka lgu jiray ayey Sagal ogaatay in qadka lagu jiro oo ay tiri haa Hello,haa Hello waxaa yiri Hanad waayo ?waa hanad, haa haye Maxaad rabtaa ?hanad ayaa markale yiri Maxaad rabta aha I oronin Marka hore I weydii xaaladeyda Caafimaad!!
Intaas Marka ay dhex martay Sagal iyo hanad oo ah Maquustaha ayaa waxaa uu hanad helay Fursad kale maxaayeelay waxaa layiri kahadal dantaada.
Waxaa uu yiri danteyda waan ka hadlayaa ,laakiin ii ballan qaad in aad qadka ku jireysid oo aad idhageysaneyso waxa aan kahadlaayo.
Kkkkkk Bal Soo daa!!!ayaa lagu yiri
Aniga kolley waxaan ahay qof daacad ah ,mana loobaahna in qofka bini aadamka ah lagu ciyaari ,waxaa aad u qurux badan in qofka la qadariyo islamrkana la siiyo xushmad ah sidii lagu dhageysto hadalada uu ku hadlaya.
Waryaa yaroow iga daa yaa Ciyaarta soo daa waxa aad ii heyso haddii kale Teleefoonka waan kuugu daminayaa.
Ok ha iga xanaaqin walaal wax kale ma ahan waxaan kuu sheegi rabo,laakiin int aan ugudbin Su’aalo ma ku weydiin ka raa ?
Haa ayeey tiri,Ok Sagaleey Waligaa wax Majeclaatay mase lagu Jeclaaday?
Kkkkkkkkkk Jaceyl Jaceyl Jaceyl Waligey wax Jaceyl sheegaya xittaa ma maqlin adiga waxaad ka hadleysaa Malagu Jeclaaday Mase Jeclaatay.
Waa layaab inta uu yara dhoola caddeeyay ayaa waxaa uu yiri waan filayay waxaana gartay in aad wali caruur tahay kkk ,laakiin qofkii ku jeclada ayaa dhib qaba ayuu yiri.
Yaroow adiga taas makuu taale Maxaad kaloo heysaa ayey tiri Sagal.
Ok abaayo I maqal
Rabbi qaadir weyee
Cirkoo roobka qubayoo
Ubax qariyay laamuhu
Il qabatina leeyahay
Sida dayaxa qamarkoo
Qiyaastii Shan iyo Toban
Qaabkiisa yahay baa
Ila qabati leedahay.
Sagal oo qosleysa ayaa ugu jawaabtay hanad walina uu ka muuqday Jees jees waxa ay tiri.
Haddii aad faqiir tahay
Dumar lama haweystee
Horta garo sidaad tahay
Hanti weye guurkiyo
Mar hadaad heli Karin
Iska joog halkaad taalo.
Haa heey howshii waxba iska ma badilin wali waxaa lataaganyahay jug jug meeshaada joog oo gabadhii Sagal aheyd waxba kama naaso caddaan,hanadna wali wax natiija ah uu gaaray majiraan Marka lagareebo hadalkaas yar oo uu lahadlay mooyaane.
Waqtiga iyo fursaduhu waa ay iska badanyihiin markale ayaa laga yaabaa in ay kulmaan Sagal iyo hanad.
Hanad waxaa uu la tashiyo gooni gooni ah uu la sameeyay qaar kamid ah asaxaabtiisa oo uu kamid yahay qoroha Sheekadaan ,laakiin waxaa lagula taliyay in uu san marba ka quusan sidii uu ku heli lahaa Sagal.
Soomaalidu waxa ay tiraahda (Nin Buka Boqol u talisay),maadaama uu Hanad bukaankiisa uu ku aadanyahay hammi jaceyl,hadana qof walba oo dhalintarada kamid ah waxaa uu siinaya Talo gooni ah ,laakiin hanad waxaa uu qaatay go’aanka ah in uu san marbana jaceylkiisa ka qusan.
Maalin kale oo isniin ah taariikhduna ay ku beegneyd 8 Juun 2007 ayaa waxaa mar kale dhacay kulan kale oo xasaasi ah oo uu hanad u arkayay Sanadkii guusha ee naftiisa ,laakiin maxaa dhacay?
Maalintaas waxaa lagu kulmay aaladda Internedka ,waana markii ugu horeysayoo ay ku kulmaan qadka Internedka ah Maalintaas jawiga waa uu ka duwanaa sidii hore.
Maalintaas Erayada la isku adeegsanayay waxaa kamid ahaa,inkastoo aanan Cod aheyn oo qoraal ahaan la is ku weedaarsanayay Erayadaan Macaan.
Waxaan Xusuustaa Maalintaas hanad waxaa uu watay macawiis ay Soomaalidu u taqaano Sabar Shaati cadaan ah iyo kabaha Ataasaha ah oo ay dad ka Soomaalidu aad u isticmaalaam.
Markii la isa salaamay kadib ayaa hanad waxaa uu is yiri haddii aad hadda u sheegto armey kaa carartaa oo ay waliba Bloock ku saartaa.
Hanad Maalintaas kaftan aan waligiis laga arag ayaa la ga dheehanayay ,taasoo keentay in ay Sagal qosol ay kabixi weydo iyadoo dhaheysa maxaa maanta laguu soo sheegay madhalashadaadaa mase?kkkkkkk
Qosolkaas ayuu hanad ka faa ideystay oo hoosta ka galiyay Sagal isgoo dhahaya.
Dab la shiday habeenkii
Dad ka u muu qanayaan
Daa washada ku wacanbaa
Dayaxoo iftiin badan
Oo aan daboolneyn
Nuur daalacoo idil
Dad ka u muuqanayaa
Bedel malahan dabeecadda
Dad ka aad la dhaqantoo
Ammaan kula dhaqaaqaan
Laakiin jawaabta kama soo daahin oo waxaad moodaa in Sagal ay jawaantii hanad ay siin laheyd ay horay u diyaarsatay ,waxaana jawaabta ay aheyd.
Naf guran miyaa soo guuxayoo
Gudlanaayo oo gaah lagilisaa
Ruuxaan gaari iyo
Gaadiid aan laheyn
Garab rarato ah
Miyuu dumar geeyaa?
Adiga guur kaama rabee
Gurigeyga ii daa ee gadaal u noqo
Guryaal iyo guyaal.
Wax baa ka dhacay wali Waxaa Socota Sheekadii qadka internedka markale hanad ayaa ku celiyay oo yiri.
Dalanbaad baan ahay
Haddii aad idiidane
Dumar kale marabo
Daa’in baa barya yaa
Inaan daawadiiso helo
Cirkoo roob ku da’ayoo
Dooguna cagaar dhalay
Xaree duna duljiiftoo
Dadka oo haraad qaba
Dur dur laga cabaa tahay.
Waa erayo layaab leh oo qofkii loo aqriyaa uu isbaadalo inkastoo ay fiicnaan laheyd in uu hanad Cod ahaan uu ugu sheego,laakiin aan eego jawaabtii.
Waxaa adiga ku gubay
Ima gaarinee gaabsaan ku iri
Riyadaa gashaa ku gaalftaa
Guul aan jirin kuu geysay
Gacal hayga suginee
Gaabsaan ku iri
God iyo waran
Gumac iyo rasaas
Ii yaala guryaha
Waan soo gamaa
Geeri baa tahee gaab saan ku iri.
Howsha marka ay halkaas mareyso ayaa hanad waxaa niyad jab ku sii riday kadib markii uu maqlay wiilkii jacfar ahaa ay saaxibo ahaayeen Sagalna ay walaalo ahaayeen waxba yaan hadal idiin ku daalinee muxuu ka yiri arintan Jacfar.
Markii uu Jacfar maqlay in arintii ay is badashay saaxibkiisna uu gaad gaad ugu jiro walaashiis ayaa waxaa Sagal uu u soo raacay goob interned Coffee ah kadib Jacfar waxaa uu furtay Emailka Sagal waxaa uu tagay goobta ama meesha war qadaha la ga dirsado New, kadib waxaa uu galiyay Email ka Hanad Sabjectiga waxaa uu ku qoray Nacas!! Laakiin Erayadii uu qoray waxaa Jacfar waxaa kamid ahaa.
From:Nin war moogo ahaa
To;Nin na cas ah oo aan aqoonin wanaagga uu leeyahay Saaxibtinimada
Waxaan kuu maleenayay Saaxib wanaagsan balse waxaad noqotay Saaxib xun,waxaad isku dirtay aniga iyo qoyskena waayo daraadaa ayaan isugu dhacnay,doqon aan saaxib la ahaa ayaad noqotay dameerna waxba ma dhaantit.
War qaddaas la soo diray ayaa hanad ka naxisay hoos marka uu u sii egayna waxaa ku saxiixnaa Jacfar iyo Sagal.
Si kastaba ha ahaatee dhibaatadaan heysata hanad waxa ay noqotay mid daba dheeraatay oo ilaa iyo iminka aan laga heynin wax natiijo ah oo laga gaaray Sagalna waxaa ay umuuqataa qof qalbi adag,laakiin maalin un bey xusuusan doontaa rafaadkan uu marayo Hanad yar.
Hanad waxaa uu qaatay go’aankii ugu danbeeyay oo aha bal markan in uu warqadii ugu danbeysay uu u diro haddii ay wax ka qabanweysana uu dhamaan dalka Soomaaliya isaga haajiridoono ,isgoo aan heysanin wax qarasha ah ,maadaama uu ka soo jeedo qoys faqiir ah oo aanan waxba heysanin,lakiin warqadda uu qoray ayaa waxaa ay aheyd mid in mudda ah laga shaqeynayay qaabkii looga qori lahaa laakiin Maxaa kamid ahaa Erayadii Emailka uu ku diray?
From:Naf ku dhow in ay waalato
Abaayo marka hore iga hano Salaan qiimo badan ee ka soo go’day wadnaha iyo baalalihiisa Soo martayna dhamaan xumnaha jirkeyga ,waxaa Salaantan aan ugu tala galay qof ka aan aduunka ugu jeclahay waana adiga waxaana ku asqeysan qabriyadii Cilmi iyo Hodan,Leylo iyo qeys iyo dhaman bahda Jaceylka .
Abaayo kolley waxaan umaleenayaa inaad aad ii dhibsatay,laakiin xaqiiqdu waxaa ay tahay in aan aniga dartaa u dhimanrabo hadaad waxba ila qabanna ay nafteydu halis ku jirto waan ogahay inaadan ka helin dad ka faqiirka ah,laakiin Jaceylka Ogow dad ka lama tashto.
Ok Macaaney kheyr baan kuu rajeynayaa ,laakiin isku day in aad bad baadiso Naf sii socata Ilove You
War qaddaas uu hanad qoray waxaa ay aheyd warqadii ugu danbeysay oo uu qoro, go’aankiisuna waxa uu ahaa haddii jawaab fiican uu ka heli waayo uu dhamaan wadanka isaga tagaayo isagoo waliba tahriib galaya naftiisana Qatar galinaayo.
Hanad ayaa Maalin waxaa booqay inbox kiisa si uu u fiiriyo in jawaab la soo sii yay iyo in kale,laakiim Markii uu furay Inbox waxaa uu arkay warqad Cusub Sabjec tigeedana waxaa ku qornaa aboowe saas ma ahan ,taasoo farxad ku abuurtay isagoo dag dag san ayaa durbadiiba waxaa uu ku dhuftay warqaddii waxaana uu indhaha Saaray.
Aboowe saas ma ahan wax dhibaata ahana ha isku beerin aniga waxaan diyaar u ahay in aan wax walba aan kaa saacidi doono in sha allaah intaas ayey sooqortay oo kali ah,laakiin war qadaas gaaban qof bey dawadiisa tahay oo aad ugu farxay,dareymayna in ay wax iska badeen
Hanad waxaa uu is yiri markaan ayey rajadu wanaagsan tahay waana xilligii ugu wanaagsaneyd alleylehe waa in aan ka faa’ ideystaa Fursadaan qaaliga ah ee kusoo martay.
Jaceylka waa wax aad u dhibdan laakiin qofkii ku samra dhibaatada uu jaceylka leeyahay waxaa macquul ah in uu helaayo qofka uu jeclaaday.
Jaceylkan haya Saaxibkey hanad waxaa uu hadda marayaa dhowr Sano waxa uu soo maray marxalo kalagidisan walina wax natiijo ah oo lagu farxi karo mahaayo ,maalinwalba waxaa soo baxaya caqabado horleh oo ku imaanaya hammiga hanad oo ku aadan si dii uu u heli lahaa gabadhii Sagal aheyd.
Sagal iyada waxaa ay u muuqataa qof uu jees jees ku jira warqaddii ay usoo qoreysay hanadna ma aheyn mid qalbigeeda uu ka soo go’ay si daacad ah, laakiin waxa ay kawaday sidii ay ugu ciyaari laheyd hanad maadama iyada haba yaraatee wax jaceyl ah uu san heynin.
Soomaalidu waxaa ay yiraahdaan dumarka waa beer jilicsanyihiin xaguu kamaray Sagal beerjaleecee dumarnimo ?mase waxa la sheegaya ayaan waxba ka jirin.
Arintan waxaa ay soo bilaabatay 2006 dii waxa ayna socotaa dhowr sano majirto wax natiija ah oo laga gaaray.
Aan ku soo laabano sheekadeynii, hanad mar haddii loo soo diray warqad ka duwan war qadihii hore waxaa uu is dhahayay waxaa Sagal ku yimid is badal kaduwan kii hore.
Maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa uu kula xiriiray qadka Taleefoonka isagoo mooday in uu isbadal jiro ayaa waxaa uu is yiri hanad bal ku dheh haddii Teleefoonka ay kaa qabato hadallo macaan.
Durbadiiba waxaa Teleefoonka ka qabtay Sagal ,hanad ayaa ku iri oo Xubbi haye laakiin mahelin jawaabtii uu filayay oo waxaa lagu yiri iyadoo ku qosleysa kaali adiga ma quusatit miyaa,!! waa uu isku naxay hanad waxaa uu sheegana waa uu garan waayay waayo mafileyn in hadalkan lagula hadlaayo.
Inta qadka Teleefoonka lagu jiro ayaa waxaa Teleefoonka uu ka go’ay hanad maxaayeelay Teleefoonka lacag ugu ma jirin marka lagareebo 29 Senti ,laakiin markii uu qadka go’ay ayaa waxaa soo Call gareeyay Sagal iyadoo adeegsaneysa Erayo aan wanaagsanen oo u muuqday Sar beeb ayaa waxaa ay ku tiri lacag kuugu majirto in aad dad ka soo wacdo oo aad wax u sheegtana waad rabtaa,waxa ay sii racisay waxyoo quranka ah Taleefoonk ii daa haddii aad deyweysana talabo ayaan kaa qaadidoonaa.
Hayaay!! howshii waxaa ay isku badashay hanjabaad hanadna Talo ayaa ku cadaatay waxa uu sameeyana waa uu aqoon waayay waxa uu atagan yahay shalaayto oo waxaa uu is leeyahay maxaa qoorta kuu galiyay jaceylkaan aan u qaaday gabadhaan ay ka fogtahay naxariista iyo beer jaleecsiga.
Bal aan idiin xasuusiyo Erayadii uu ku hadlayay ama ku calaa calayay hanad.
Jaceylkaan la’ila wadin
Maxaa aniga igulaaday
Aniga ii loogay
Aniga igu leexshay
Laabtey ka go’in Middaan
Aniga igu lifaaqeysan
Hanad tala uu hayo majirto mana yaqaano hadda waxa uu sameeyo xitta ma awooda in la tashiyo uu la sameeyo dad ka asaxaabtiisa ah iyo dad ka ugu waaya aragsan arintaan,waxaana ka soo haraya oo kali ah Erayo ku aadan Calaa cal.
In aan liito iyadaa lasocon
Araga iga laabtay
Midibkeeda luulkaa ladhacay
Luqunta kala saarka.
Inta uu san dhameyn Erayadaas ayaa waxaa guriga u soo galay Maxamed Nuunow oo ahaa wiil ay daris ahaayeen islamarkaana ay saaxibo ahaayeen.
Wiilkii ayaa dhagta u taagay Erayadaan uu ku hadaaqaya hanad waxaana Maxamed uu dareemay in hanad ay wax un si ka yihiin,inta isagoo aan dhameysinin ayuu ka dhex galay oo uu ku yiri haye kaabe maanta waxaa ka soo baxaya hadallo macaan badan ,laakiin waxaa fiicnaan laheyd buu yiri in ay ku maqleyso qofta aad jeceshay oo aad ugu tala gashay hadallan macaanka badan ,qofkii dhageystana runtii xaadiisa ayaa is taageysa ayuu sii daba dhigay Maxamed oo la hadlayay hanad oo ahaa bukaan Socod.
Qisadaan oo ah qiso dheer oo wali taagan ayaa waxaa ay tahay mid aan lagu soo koobi karin qoraal iyo wax lamid, laakiin hadda majirto wax faa ida ah uu gaaray hanad oo muujinayay dadaal dheeri ah oo ku aadan sidii uu mar un u heli lahaa gabadhaan ay calmatay naftiisa.
Hanad hadda waxaa uu ku nool yahay Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya gaar ahaan degmada heliwaa,
Sidoo kale Sagal waxaa ay hadda ku noo shahay Degmada daayniile ee duleedka magaalada Muqdisho, walina waxaa ay ku adkeysaneysaa in habayaraatee aysan waxba u qabaneynin Wiilkan hanad ah oo isagu la il daran Jaceylkeeda.
Wali waa taagan tahay Arin tan ku aadan qisadaan Jaceyl ee dhexmareysa hanad iyo Sagal oo labaduba muqdisho iyo nawaaxigeeda ku wada Sugan .
Qeybtii ugu horreysay ee qisan intaas ha inoo joogto,laakiin waxaan idiin ballan qaadeynaa in aan idiin soo gudbin doono Waxii ku soo kordha qisadan Jaceyl ee aan ugu magacdarnay Waa isla Qumanaaye Ma anigaa Qaldanaa?!!! Sidoo kale waxaan ka soo saaridoonaa Book si toos ah arintan ugu hadlaayo isgoo dhameystiran
Sheekadaan dhisideeda waxaa gacan iga siiyay Yaasiin Sheekh Maxamuud (Abuudaaha),dhanka geeraarkana Abwaan Cabiraxmaan Cabulaahi nuur(Kongo)
W/D/ Axmed Xasan Ibraahin (Axmed yare)
Email axmedyare20s@hotmail.com NEWS IN ENGLISH